Klopp Oo Amaan Ugu Qubeeyay Saxiixa Fashilmay Ee Liverpool – Sharraxaad Ayuu Ka Bixiyay Sababta – Garsoore Sports
Klopp Oo Amaan…
Klopp Oo Amaan Ugu Qubeeyay Saxiixa Fashilmay Ee Liverpool – Sharraxaad Ayuu Ka Bixiyay Sababta
Thiago ayaa durbaba noqday “ciyaaryahan aad muhiim ugu ah” Liverpool, inkasta oo Jurgen Klopp uu rumeysan yahay inuusan weli arkin waxqabadka ugu fiican ee numberkiisa 6aad, balse waxa uu carabka ku dhuftay inuu ogyahay inuu si dhaqso leh usoo bandhigi doono.
Shaki kuma jiro in xilli ciyaareed adag uu Anfield ku qaadanayo cayaaryahan Thiago Alcantara kaddib markii uu heshiis 25 milyan oo Euro kaga soo wareegay kooxda Bayern Munich.
Thiago ayaa markii uu usoo dhaqaaqay Liverpool waxaa laga qabay rajo aad u sarreysa, hayeeshee ciyaaryahankan reer Spain ayay waqti ku qaadatay inuu la qabsado oo uu u adkeysto mudooyin xanuun iyo dhaawac ah, laakiin haatan waxa uu qeyb ka yahay safka koowaad ee shaxda macalin Klopp.
Si kastaba ha noqotee, waxaa weli jirta walwal laga qabo wax soo saarkiisa, iyadoo dhaleeceyn caajis ah ay tilmaamayso gool iyo caawimaad la’aantiisa kooxda, in kastoo uusan waligiis aheyn laacib lambarro isdaba joog ah ka sameeya goolka hortiisa.
Tababare Jurgen Klopp ayaa si kastaba ha ahaatee sheegay in “boqolkiiba boqol uu ku qanacsan yahay” in Thiago uu Liverpool ku soo bandhigi doono tayadiisa “heerka sare”.
“Taasi horey ayey u dhacday,” ayuu yiri, markii la weydiiyay haddii 30-jirkan uu u baahan yahay waqti dheeri ah si uu ula qabsado kooxda.
“Thiago wuxuu yimid xilli ciyaareed runtii aad u adag, ciyaaryahan aad muhiim u ah ayuu inoo yahay inaga Marka taasi waxay u badan tahay waxa ugu muhiimsan ee aad isaga ka sheegi karto.”
“Wuxuu ku billowday sifiican kaddib waxaa helay dhaawac xun, sidoo kale waxay ku qaadatay waqti aad u dheer inuu kusoo laabti koox uusan la qabsan.”
“Waxaan heli doonaa waxqabadkiisa ugu wanaagsan. Uma maleynayo inaan horey u aragnay, laakiin taasi dhib maahan.”
“Waxaan boqolkiiba boqol ku qanacsanahay inaan kaheli doono waxa ugu fiican, maxaa yeelay waa ciyaaryahan heer caalami ah.”
DEG-DEG: Neymar Oo Heshiis Cusub U Saxiixay Kooxdiisa PSG
Leeds 3-1 Tottenham: Rajadii Afarta Sare Ee Spurs Oo Soo Idlaanaysa Kaddib Guuldaradii Elland Road